Zambia oo bukaanada lagu amray baaritaanka HIV - BBC News Somali
Image caption In kabadan 14% dadka Zambia ayaa qaba HIV
Wasiirka caafimaadka ee dalka Zambia ayaa ku hanjabay inuu xiri doono xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay ee dalkaasi ku yaal haddii aanay bukaanada oo dhan ka qaadin baaritaan qasab ah ee HIV-ga.
Bilowgii todobaadkan, ayuu madaxweynaha waddankaasi, Edgar Lungu, waxa uu sheegay in baaritaanka HIV-ga, talo-siinta iyo daweyntuba ay qasab tahay inay fuliyaan isbitaallada dowladda iyo xarumaha caafimaadka.
Wasiirka caafimaadka, Chitalu Chilufya, ayaa sheegya in dadka ay u wanaagsan tahay inay ogaadaan in ay qabaan HIV iyo in kale, si ay noolashooda u maareeyaan oo haddii ay qabaana u qaataan dawooyinka kaalmaatiga ah.
Waxa uu intaa ku daray in boqolkiiba 80 bukaanada la geeyo cisbitalka dalkaasi ugu weyn uu xanuunkooda la xiriiro HIV.
Madaxweyne Edgar Lungu ayaa ku doodaya in baaritaanka qasabka ah ay shacabka dalkaasi ka caawin doonta in cudurkaasi laga dabargooyo marka la gaaro sanadka 2030-ka.
Balse mucaaradka iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha ee Zambia ayaa sheegaya in tallaabadan ay kordhinayso fuquuqa iyo in dadka bukaanada ah aanay aadin xarumaha caafimaadka.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in inkabadan boqolkiiba 14 dadka Zambia ay qabaan HIV, uuna xanuunkaasi ku badan yahay dumarka dalkaasi.